Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir oo Biyaha laga jartay - Awdinle Online
Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir oo Biyaha laga jartay
Wararka ay heleyso Shabakadda Wararka ee Awdinle Online ayaa waxaa ay sheegayaan in Xarunta dowladda hoose ee Xamar oo uu guddoomiye ka yahay Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) maalintii 7-aad ay Biyo la’aan majirto, kadibmarkiiBiyaha lags martay.
Arrintaasi ayaa la sheegay inay sababtay in shaqadii adkaato oo xitaa howl-wadeennadu ay waayaan biyo la isticmaalo, Musqul lagu galo ama lagu weeseysto, sida ay sheegeen qaar kamid ah Shaqaalaha Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir.
Agaasimayaal katirsan gobolka Banaadir oo la soo xariiray Awdinle Online ayaa sheegay in sababta biyaha gobolka Banaadir looga jartay ay tahay in la bixin waayey lacagtii biyaha, isla markaana Milkiilaha Ceelka siiya Xarunta uu amray in Biyaha laga jaro.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa lacag farabadan Canshuur ahaan uga qaada dadka ku nool Muqdisho, balse waxaa layaab noqotay in Biyaha laga jarto Xarunta Maamulka Gobolka, kaddib markii lacagta Biyaha ay bixin waayeen.
Previous articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo qaabilay wafdi ka socda Dowladda
Next articleSoomaaliya oo ka hadashay siideynta dhaqaatiirta u afduubnaa Shabaab